Askari ka tirsan Ciidamada Jubbaland oo Toogasho ku dilay Xaaskiisa
Wararka ka imaanaya magaalada Kismaayo ee xarunta maamulka Jubbaland ayaa waxa ay sheegayaan in askari ka tirsan ciidamada maamulkaas uu toogasho ku dilay Xaaskiisa oo lagu magacaabi jiray Muxubbo Maxamed Guure.
Askariga dilka geystay iyo xaaskiisa uu dilay ayaa waxa la sheegay in muddooyinkaan uu ka dhexeeyay muran kaasoo ugu dambeynn sababay inuu toogto xaaskiisa oo ay sidaa ku geeriyooto.
Gacan ku dhiiglaha ayaa la sheegay in dilka xaaskiisa uu u, isticmaalay qoray la sheega inuu watay xilligii uu dilka geysnayay isagoo dhowr xababdood qeybaha sare kaga dhuftay isla markaana marxuumadda ay sidaa ku geeriyootay.
Askariga dilka u geystay xaaskiisa ayaa la sheegay inuu dhawaan guursaday isla markaana uu qabay 3 bilood oo kaliya.
Ciidamada Jubbaland ayaa ugu dambeyn ku guuleystay inay gacanta ku dhigaan askariga gacan ku dhiiglaha isla markaana ay u taxaabaan xabsiga,isagoo iminka ku jira xabsi kuyaala magaalada Kismaayo ee xarunta maamulka Jubbaland waxana la filayaa in dhawaan maxkmad lasoo taago si cadaalada loo mariyo.
Sarkaal ka tirsan Ciidamada Dowladda oo Caawa lagu Dilay Magaalada Muqdisho